Reviewing 2008 and Welcoming 2009! | The World of Pinkgold
MgThaJan on December 29, 2008 at 2:57 pm said:
2009 မှာ ခုထက်ပိုဆတိုးလို့ အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ…. 🙂
Craton on December 29, 2008 at 6:26 pm said:
မိသားစုတာဝန်ကို ဒီလိုတတ်နိုင်သလောက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ထမ်းတဲ့သူမျိုးကို ကျနော်သိပ်လေးစားတယ်။း)
strike on December 29, 2008 at 11:24 pm said:
2008 မှာ ကျွန်မ ပက်ပက်စက်စက်ကို စန်းပွင့်တာနော်.. Online ရော Offline ရော စုံနေတာပဲ။ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး အဲလိုနှစ်ယောက်ပြိုင်တွေ၊ သုံးယောက်ပြိုင်တွေ။ အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ရှင် ဟား ဟား။
Pinkgold on December 30, 2008 at 12:33 pm said:
တစ်ခါတစ်လေလေး ကြွားလို့ရတာ ကြွားပါရစေ ဘဘ strike ရယ် အဟိ
MELODYMAUNG on December 30, 2008 at 3:26 pm said:
tag လို့ပဲရေးရေး ရေးချင်လို့ပဲရေးရေး ဝေးနေရတုန်း ထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေ သိရလို့ သိုင်းခရု
Congrats your all achievements and love!
Happy New year 2009 to you naw, sis
strike on December 30, 2008 at 5:49 pm said:
joking sis 😛
JulyDream on January 1, 2009 at 8:31 am said:
strike on January 1, 2009 at 1:53 pm said:
sin dan lar on January 2, 2009 at 9:19 am said:
ညီမလေးကိုပါ ဖလမ်းဖလမ်းထနည်း သင်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ကိုယ်လည်းလျှော့စရာမလို၊ အဖော်လည်းရ မကောင်းဘူးလားးးးးးး…..
သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ပါတယ်
အိမ် on January 10, 2009 at 5:52 pm said:
2008 မှာဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေ အစုံပါပဲလားဗျာ
နောင်နှစ်တွေမှာလဲ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါ